ဂေဇက်ရွာကဘယ်တော့မှမထွက်ဘူး………..(စိတ်ပျော်သလောက် နေပါ့မယ် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ဂေဇက်ရွာကဘယ်တော့မှမထွက်ဘူး………..(စိတ်ပျော်သလောက် နေပါ့မယ် )
လေးဘလက် နောက်ထပ်ပို့စ်သစ်တစ်ခုတက်တာမြင်ချင်လို့လား ……… ကိုနေကို မုတ်ဆိတ်မွှေး ထူလဗျစ်တွေဘာတွေ လာပြောနေတယ် ……. ကိုနေက သများရဲ့ ဦးဦး ……. အူးအူးကိုလာ မထိနဲ့ သများမကြိုက်ဘူး ………
ကိုဘလက်ပြောမှ တွေ့ တယ်ဗျ မနေဝန်းနီ ဆိုတော့။အမလေးးးးးလေးးးးးးး
ထွက်မယ်လို့မပြောပါဘူး ပျော်တယ်လို့ ပြောထားတယ်လေ အဲ့ဒါဘဲ နောက်နေကျတော့ စနိုးကအပြင်မှာတကယ်မမြင်ဘူး အကိုအမတွေ ကျားတွေလားမတွေလားလည်းမသိတော့ဘူး ဂေဇက် ကသူတွေ အကုန်ပန်းတနော်ကို သွားလှူတုန်းကလည်းစနိုးမလိုက်ရဘူး ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ တကယ်ကောင်းကောင်းမသိဘူး နာမည်လေးတွေဘဲ သိလို့ ရေးပေးလိုက်တာပါ ပန်းတနော်သွားတုန်းကပုံလေးတွေ တင်ထားတာတွေ့လိုက်သေးတယ် ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းပြန်ရှာတော့မတွေ့တော့ဘူး တကယ်မသိလို့မေးတာပါ ဘယ်လိုပြန်ရှာရမလဲလို့ ဘယ်သူတင်တဲ့ပို့စ်လည်းတောင်မသိတော့ဘူး ပုံလေးတွေတော့တွေ့လိုက်တယ် ပျော်ဖို့လည်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ် နောက်တခေါက်ကျရင်ရွာသူ/သားများတွေ့ဆုံပွဲကျရင် စနိုးကိုပါအောင်ခေါ်ကျပါနော် ကိုယ့်ရွာသူရွာသားတွေ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ခင်ခင်မင်မင် တွေ့ချင်လို့ပါ။
ကိုယ့်ရွာသူားတွေ အများကြီးနဲ့ တွေ့ရဆုံရ ခင်မင်ရမှာ။
ထွက်ခဲ့ရင်လဲ ရထားတဲ့ပွိုင့်လေးတွေ ကျော့်ကို လွှဲပေးခဲ့ဦး..
ကျုပ်တို့လဲ အသစ် အသစ်ခြင်းမို့ ထိုခံစားချက်ရှိကြောင်း
ထိခိုက်ရပါတယ်။ အခုရေးတော့လဲ ဖတ်ကြပါဘူး ဘာတွေရေးမှန်းမှ မသိတာကိုး
လာတောင် လေပြေထိုးရတဲ့ အဖြစ် အော် အနိစ္စ….. အနိစ္စ
ကျုပ်သိရသလောက်တော့ အဲလူကြီးက တော်ယုံတန်ယုံ ၀င်မပြောဘူးဗျ
စာရေးပီးတင်ယုံ ပစ်စလက်ခတ် လုပ်လာတာမျိုးကတော့ လုံးဝလက်မခံပါ
အခုတောင် ကြီးဒေါ် အရေးအသားက ဒေါသသံ မကင်းသေးဘူး ခင်ည
ရေးမကူးတတ်လို့ ရေကူးရင်းနဲ့ သင်တယ်ဆိုတဲ့ တဆင့်မြှင့် သဘောတရားကို နားလည်ပေးပါတယ်
သို့ပေသိ ဒီမိုရွာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆန္ဒပြလို့တော့ (ကြီးဒေါ်ပို့စ်တွေကို) ရကြောင်း ထပ်မံတင်ပြပါရစေ
နောက်တချက်က စီမံချက်ကာလမို့ စည်းကမ်းနဲ့ အရည်အသွေးပိုင်း အားလုံးတွန်းတွန်းတိုက်တိုက် သွားနေချိန်မှာ
လက်တဆစ် မာနလေးကို ခဏသိမ်း၍…………………………………………………………………………..
ဒီလောက် သေချာရေးနေတဲ့ ကြားက မှားသွားသေးတယ်
* အော်ဇာဗေးရှင်းလို့ ပြောင်းဖတ်ပါရန် (ဒါတောင် အသံထွက်က မှားနိူင်သေးတယ် )
အေးပေါ့ အေးပေါ့ အေးပေါ့ အေးပေါ့ … ။
ဘာမှစိတ်ထဲမထားပါနဲ. မနှင်းဖြူလေးရေ…ဒီလိုပါပဲ…ရွာထဲကို ကျွန်တော်တို.စ၀င်တုန်းကလဲ အဲလိုပို.စ်တင်ချင်တဲ့ဟာ ကိုယ်ပို.စ်လေးကို ဘယ်သူက အရေးတယူဖတ်ပေးမလဲ ဆိုတဲ့ဟာ တစ်ခါတလေ ကိုယ်နစ်နိမ်းလေးကို ထည့်ရေးရင် ပျော်လို.မဆုံး တွေ.တဲ့သူအကုန်လိုက်ပြော လိုက်ပြ လုပ်နေတာလေ….အခုထိလဲ အဲလို ဖြစ်နေတုံးပါပဲ မနှင်းဖြူလေးရယ်….
ကိုShwe Tike Soe ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နော် မှတ်သားထားပါ့မယ် စနိုး ဂေဇက်ကို သဘောကျ တာအဲ့ဒါလေးတွေ တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်လေးတွေမြင် ကျ ပြီးရင် အမှားလေးတွေထောက်ပြကျ အမှန်ပြင်ပေးကျ မန်းဂေဇက် ရွာအတွင်း ရှိသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်မနေ့ကဆို စနိုးတကယ်ကို ဂေဇက် ကိုလုံးဝမသုံးတော့ဘူးလို့ စိတ်ကတွေးလိုက်မိတယ် ဒါပေမယ့်အကျိုးမရှိဘူးလေ ကိုယ်သာမသုံးရင် ကိုယ့်ဘဲ မလေ့လာဖြစ်ဘူး ကောင်းတယ် ဒါကြောင့် ဂေဇက်ကဘယ်တော့မှမထွက်ဘူး ကိုယ်မရေးတက်သေးဘူး ဘာမှမလုပ်တက်သေးဘူး ဆိုသူများဘယ်လိုလေးတွေရေးတယ် သူများဘယ်လိုလေးတွေ တွေးသလဲ ဘယ်လိုလေးတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်တင်တယ် သတင်းလေးတွေ ကျန်းမာရေးတွေ ဘယ်လိုတင်တယ်ဆိုတာ လေ့လာလိုက်ပါအုံးမယ် နားလည် သည်းခံပေးပြီးလာရောက်ဖတ်ပေးတဲ့ သူများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။။။
ရွာလေးထဲကို ရောက်တာမကြာသေးပေမယ့် ရွာသူရွာသားတွေ ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိနေကြတာတွေ့ရတော့ အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဝေဖန် ထောက်ပြကြတယ်ဆိုတာလည်း အပြစ်မြင်လို့မဟုတ်ပဲ ခင်မင်ရင်းနှီးလွန်းလို့ လို့ထင်ပါတယ်။ အူးဘလက်က စနိုးကို ဆန်ရင်းမို့ နာနာဖွပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်။ ဘာပဲပြောပြော စနိုးရေ ဒီရွာလေးက အရမ်းပျော်စရာကောင်းလို့ ထွက်ဖို့ ဘယ်သူမှတွေးကြမှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ စနိုးလည်း အမြဲပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ။
ရွာထဲမှာ နေရင် အချင်းချင်း အရင်ဆုံး နားလည်မှု ပေးတတ်ရမယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ဗွေမယူရဘူး။ သည်းခံရမယ်။ နောက် စည်းလုံးရမယ်။ စနိုးလေး ဒါလေးတွေ သိထားရမယ်နော်။
တစ်ခုတော့ မနော အမှတ်တရ စကားပေးလိုက်မယ်။ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ အမြဲတမ်းကြီး ရှိမနေသလို စိတ်ညစ်မှုတွေဟာလည်း ကြာရှည် မတည်မြဲဘူးဆိုတာပါပဲ။
snow white ခင်ဗျာ
ကျနော့် သဘော ကတော့ ကြိုးစားပြီး ဆက်ရေးဖို့ 
စနိုးရေ.. လိမ္မာ လာပြီ….နော် ။
မေဖလားဝါရေ .. မနှင်းဖြူကို အားလုံးပြောကြသလိုပါဘဲ . မေဖလားဝါးလည်း ဖတ်ရုံသာ ဆိုတာ မလုပ်ပါနဲ့။ မန့်ပါ ရေးပါ ဗျို့။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တာပါ အားပေးသူအပေါင်းကို စနိုးကိုအဲ့လိုအားပေးမှုတွေ ရှိမှ စာဆက်ရေးချင်စိတ်လည်းဖြစ်လာတယ် စာလုံးပေါင်းလည်းမှန်အောင် ရေးနေပါတယ် စာများလည်းရှည်လာအောင်ရေးတက်အောင်အကျင့် ဖြစ်အောင်ရေးနေပါတယ် ။။။